NERO RECODE FREE DOWNLOAD - MMEMME NYOCHA - 2019
N'adịghị ka ọtụtụ ụdị oyiyi, faịlụ CDR adịghị akwado ndị editọ nke oge a, nke nwere ike ịchọ ka ha gbanwee. Na ọ bụ ezie na o kwere omume iji tọghata akwụkwọ ndị ahụ na usoro ọ bụla dị ugbu a, mgbe ahụ, anyị ga-ele usoro ahụ anya site na iji ihe atụ JPG nyocha.
Nyefee CDR na JPG n'ịntanetị
Ị nwere ike ịmeghari ntughari site na iji ọtụtụ ịntanetị na-akwado na-arụ ọrụ na ụdị usoro. Anyị na-atụle naanị ụzọ abụọ kachasị mfe.
Usoro 1: Zamzar
Ọrụ Zamza n'Ịntanet bụ otu n'ime ihe kachasị mma na nke ya ma nye gị ohere iji tọghata faịlụ CDR na JPG na njedebe ntakịrị. Otú ọ dị, iji jiri ya, ị ga-achọ adreesị ozi-e dị irè.
Gaa na Zamzar website
Mgbe anyị meghere akụ nke anyị gosiri, na ngọngọ ahụ "Cdr ka jpg" pịa bọtịnụ "Họrọ faịlụ ..." ma kọwaa ọnọdụ nke onyinyo ahụ nwere ike ịgbanwe. Ịnwere ike ịdọrọ faịlụ ahụ na mpaghara akara.
Mgbe akwụkwọ CDR gbakwunyere, na ngọngọ ahụ "Nzọụkwụ 2" họrọ uru site na listi ndọpụta "Ntuziaka".
Ọzọ, tinye adreesị ozi-e gị na igbe ederede. "Nzọụkwụ 3".
Pịa bọtịnụ ahụ "Tọghata" ke akpatre ikpehe ọnọde.
Ịhazi ọsọ na-adabere na atụmatụ nke akwụkwọ ahụ.
Ugbu a ịkwesịrị imeghe akwụkwọ ozi ahụ ezitere na adreesị ị nyere.
Chọta njikọ nke anyị na-ede na ozi site na ọrụ ma soro ya.
Rịba ama: Usoro mgbanwe ga-ekwe omume n'ime awa iri abụọ na anọ mgbe a gbanwechara faịlụ.
Na peeji na-esonụ, pịa bọtịnụ ahụ. "Download ugbu a" ma zọpụta nsonaazụ ikpeazụ n'ebe ọ bụla na PC.
N'ọdịnihu, ị ga-enwe ike imeghe ma ọ bụ mezie otu foto JPG.
Ọrụ a na-ahụ maka ịntanetị na-enye gị ohere ịhazi ọ bụghị naanị CDR na JPG, kamakwa ọtụtụ usoro ndị ọzọ, mana kachasị ikikere faịlụ dị oke 50 MB.
Usoro 2: fConvert
Na weebụsaịtị nke fConvert n'ịntanetị, ị nwere ike ma ọ bụ gbanwee faịlụ CDR na JPG ma ọ bụ hazie nsonaazụ dị ka ịchọrọ. N'otu oge ahụ, ọ ga-abụrịrị ọfụma na-adabere na ọnụọgụgụ nke ịtọpụtara n'oge ntughari.
Gaa na fConvert website
Na ibe nke onye na-agbanwe ihe ntanetị online, pịa "Họrọ faịlụ" ma dee ihe odide CDR chọrọ.
Rịba ama: Ogo kacha ekwe nha faịlụ abụghị nanị.
Na akara "Mma" tọọ uru "100".
Mgbanwe ndị ọzọ na-agbanwe na ntụgharị uche gị, dabere na ihe achọrọ maka nsonaazụ.
Iji malite usoro ntọghata, pịa "Tọghata".
Mgbe ị rụchara nke ọma, a ga-enye gị aka. "Nwegharị nke ọma".
Pịa na njikọ dị na kọlụm "Nsonaazụ"iji budata ihe JPG na kọmputa gị.
Hụkwa: Chegharịa foto na JPG n'ịntanetị
Dịka ị pụrụ ịhụ, ọrụ ndị a na-ahụ maka ịntanetị na-enye gị ohere ịmepụta CDR faịlụ n'enweghị ihe ọ bụla. Ọ bụrụ na ịchọrọ imegharị ntughari, naanị nhọrọ bụ CorelDraw software.